Biraon'ny vola madinika, Kungl. Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska museum - Stockholm
Eoropa Soeda Stockholm
Adiresy: Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm, Soeda
Phone: +46 8 519 553 00
Ny ora fiasana: manomboka amin'ny 11:00 hatramin'ny 17:00
Angamba ny fandravahana fototra amin'ny distrikan'i Gamla Stan ao an-drenivohitr'i Soeda dia ny tranombakoka tranainy indrindra - ny Royal Cabinet of Coins. Eto dia angon-drakitra goavam-be misy fitaovana numismatic ampiasain'ny firenena amin'ny fotoana samy hafa.
Ny mpanorina ny tranombakoka
Ny tranombakoka ao Stockholm dia noforonina araka ny baikon'ny Mpanjaka Juhan III tamin'ny 1572. Ireo vola madinika tranainy dia nangonina mba hahafantarana ny zon'i Soeda ho sary eo amin'ny tandindona misy ny satroboninahitra telo. Mipoitra izany fa io sariohatra io dia voamarika amin'ny sandam-bola, manomboka amin'ny taonjato XIV. Ny rakitra voalohany natao tamin'ny fampiratiana mozika dia natao tamin'ny taona 1630, tamin'izany fotoana izany dia nisy ihany ny 57 samples.
Ny fampiratiana ny Royal Cabinet of Coins dia fototry ny asa rehetra ao amin'ny tranombakoka, izay ahitana ny fampiratiana sy ny fikarohana siantifika. Androany, ny Tranombakoka Miozolomana any Stockholm dia nahangona mpizara mihoatra ny 600.000 notanterahina tany Sweden ihany, fa lavitra ny sisin-taniny.
Ny maro an'isa dia heverina ho ny ampahany izay misy vola madinika isan-karazany. Ny lasantsy sarobidy indrindra dia ny takelaka vita amin'ny varahina, izay nahatratra 19.7 kg ny lanjany. Ny vola madinika dia natao nandritra ny fitondran'ny Mpanjakavavy Cristina, teo amin'ny 1644 tany ho any. Ny sandam-bola hafa dia tafiditra ao anatin'ny fanangonana:
Mediam-bola koa no heverina ho sarobidy.
Ahoana no hamenoana ny vola ho an'ny tranombakoka?
Ny santionana vaovao dia miseho ao amin'ny tranombakoka noho ny fanomezam-pahasoavana, fanomezana avy amin'ny mponin'ny firenena. Ny sasany amin'ireo fampiratiana dia nividy amin'ny varotra, dia notadiavina tany amin'ny toerana fakana tombony. Iray amin'ireo akora manan-danja ny fifanarahana 1974, rehefa nividy ny Tranombokin'ny Banking Museum ny fitantanana ny Royal Coin Office. Nanomboka teo, tsy nahazo vola afa-tsy vola ara-bola ihany koa ny fampirantiana, ary koa ny votoatiny ara-tantara.
Afaka mandeha any amin'ny toerana ianao amin'ny alalan'ny fitateram - bahoaka . Ny fiatoana akaiky indrindra "Slottsbacken" dia hita ao anatin'ny 15 minitra. mandeha amin'ny tranombakoka. Ireto avy ny bus 2, 55, 76, 191, 195 avy any amin'ny faritra maro any Stockholm .
Church of St. Nicholas (Stockholm)
Ny Til Gallery
Ny trano Riksdag
Historical Museum (Stockholm)
Fanosihosena mavo amin'ny vehivavy - ilaina ve ny mijery dokotera?
Kitapo avy amin'ny karaoty
Ny alèin'ny mangatsiaka amin'ny ankizy - ahoana no hisorohana ny fisehoan-javatra mampidi-doza?
Pyometra amin'ny alika - soritr'aretina
Kafe miaraka amin'ny kanelina - tombony
Ahoana ny fomba hanamboarana valindriaka roa?
Miandrasa avy amin'ny fahatsapana - Christmas decoration
Melania Trump dia nanitsakitsaka ny protocol, tonga tao amin'ny Kongresy manokana avy amin'i Donald Trump
Akorandriaka ao amin'ny zaza
Ireo vokatra manatsara ny metabolisma
Impiry mahazaka karaoty?
Vava manda vita amin'ny polyurethane
Olana mahomby ho an'ny kohaka maina